मेयर बालेन शाहले दोस्रो महत्वपूर्ण निर्णयहरु हेर्नुस, विद्युत‍्का तार ‘अन्डरग्राउन्ड’ गर्ने देखि अन्य के के ? – Tufan Media News
मेयर बालेन शाहले दोस्रो महत्वपूर्ण निर्णयहरु हेर्नुस, विद्युत‍्का तार ‘अन्डरग्राउन्ड’ गर्ने देखि अन्य के के ?
२९ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:१६
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा विद्युत्का तार डेढ वर्षभित्र ‘अन्डरग्राउन्ड’ हुने बताएका छन् । महानगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै प्रमुख शाहले यस्तो बताएका हुन् । उनले सडक, विद्युत् र खानेपानीका प्रमुखलाई राखेर आफूले बैठक आयोजना गरेको र सो बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट तार डेढ वर्षभित्र ‘अन्डरग्राउन्ड’ हुने प्रतिबद्धता जनाइएको शाहले बताए ।
मेयर शाहले हरेक घरमा रिभर्स बोरिङ गर्नपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ‘हरेक घरमा रिभर्स बोरिङ गर्न सकियो भने वर्षामा बाढीको सम्भावना पनि कम हुन्छ, उनले भने, यसका लागि विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल अघि बढाएका छौं। हेर्नुस –
गुल्मीमा पत्नीलाई ब’लात्कार गरेको आ’रोपमा एक पुरुष प’क्राउ परेका छन् । मदाने गाउँपालिका–४ निवासी २४ वर्षीय महिलाले आफ्नै पतिवि’रुद्ध शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ब’लात्कारको जा’हेरी दिएकी हुन् ।
ती महिलाको जा’हेरीका आधारमा प्रहरीले निजका पतिलाई नि’यन्त्रणमा लिएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय पुर्कोटदहले पीडित महिलाको उ’जुरीका आधारमा ती पुरुषलाई प’क्राउ गरी अनु’सन्धान गरिरहेको गुल्मीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी माधवराज खरेलले जानकारी दिए ।
प्रहरीले पी’डित र पीडक दुवैको नाम गोप्य राखेको छ । स्थानीयवासीका अनुसार उनीहरुको २०६८ सालमा विवाह भएको हो । सो दम्पतीका दुई सन्तान छन् ।
प्रहरीका अनुसार ती महिलाले आफ्नो पतिले डर–धा’क, ध’म्की देखाई पटक पटक आफ्नो ईच्छा वि’परीत यौ’न स’म्पर्क गर्ने गरेको जा’हेरीमा उल्लेख गरेकी छन् । उनको जा’हेरीका आ’धारमा वैवाहिक जव’र्जस्ती क’रणी मु’द्दामा अनु’सन्धान भइरहेको डिएसपी खरेलले बताए ।